Dejinta qarsoon ee aad ku isticmaali karto taleefankaaga Huawei | Androidsis
Dejinta qarsoon ee aad ku isticmaali karto taleefankaaga Huawei
DaniPlay | | Khiyaamada Android
Sida qaar ka mid ah taleefannada casriga ah ee Android, Huawei waxay leedahay goobo qarsoodi ah si ay wax yar uga hesho iyo xitaa inaad awoodo inaad ogaato faahfaahinta qaar. Waxay ku saleysnaan doontaa amarrada ku jira dalabka taleefanka, iyo sida boosteejooyinka kale ee nidaamka Android.
Xulashooyinka waxaa ka mid ah Mashruuca Mashruuca, arag IMEI aaladda, arag jadwalka buuxa ama xitaa samee baaritaanka FCM (Firebase Cloud Messaging). Waxaad sidoo kale awoodi doontaa inaad ogaato macluumaadka taleefanka amar amar ku saleysan koodh, si fududna u ogaato taxanaha dhammaystiran ee aad tilmaami karto.
1 Liiska Mashruuca
2 Ciladda FCM
3 Macluumaadka Aaladda
4 Eeg jadwalka taariikhda taleefankaaga Huawei
5 Ogow IMEI
Mashruuca Mashruucu waa sida magaceedu tilmaamayo liiska sare ee qalabka Huawei, laga bilaabo howlaha horumarsan si loo helo xogta terminal. Mar alla markii aan galno waxaan ogaan karnaa faahfaahinta xiisaha leh ee ay ka mid yihiin ogaanshaha heerkulka batteriga, xaaladdiisa, qaabeynta taleefanka, ogaanshaha haddii aad leedahay taleefan bilaash ah, iwm.
Si aad u gaartid Menu loo yaqaan Mashruuca waa inaad ku qortaa waxyaabaha soo socda dalabka taleefanka:
Fur barnaamijka taleefanka
Gali nambarka * # * # 2846579 # * # *
Liiska ayaa furi doona
Hadda waxaad awoodi doontaa inaad sahamiso wax walba, laakiin ka taxaddar waxaad taabato
Firebase Cloud Messaging (FCM) waa cilad lagu helo farriimaha laga helo barnaamijyada sida WhatsApp, Boosteejooyinka Huawei waxay heli doonaan xogtan ku saabsan ogeysiisyada. Waxay ku tusi doontaa farriimihii ugu dambeeyay ee aad heshay oo sidaa awgeed la soco wax kasta oo ku dhaca arjiga farriinta iyo macluumaadka kale.
Fur barnaamijka taleefanka markale
Gali nambarka * # * # 426 # * # *
Hadda gal marinka oo arag farriimaha cusub, si aad uga jawaabto waa inaad aadaa WhatsApp ama arjiga soosaara
Xulashadani waxay na siin doontaa wax walba oo ku saabsan macluumaadka taleefanka casriga ah adigoo qoraya lambarka, waxay ku tusi doontaa wax walba oo ku saabsan mobilada aad haysato. Waa ikhtiyaar deg deg ah inaad awood u yeelatid inaad gasho macluumaadka ku saabsan qalabkaaga, markaa halkii khiyaanadu tahay marin u helka tooska ah.
Gali nambarka * # * # 0000 # * # *
Markaad gasho wuxuu kuu sheegayaa wax walba oo ku saabsan terminaalka
Eeg jadwalka taariikhda taleefankaaga Huawei
Haddii aad caadi ahaan buuxiso jadwalka taariikhaha iyo dhacdooyinka, waxaa ugu wanaagsan in wax walba la ogaado gebi ahaanba, tan awgeed waxaa jira xulasho qarsoon oo ku jirta taleefankaaga Huawei. Kala sooc dhacdooyinka lala xiriiro, ciidaha, kuwa lambar ku taxan, faahfaahinta kale ee xiisaha leh.
Gali taleefanka * # * # 225 # * # *
Waxay ku tusi doontaa dhammaan munaasabadaha la qorsheeyay
Xal degdeg ah oo lagu ogaanayo lambarka IMEI ee boosteejadaada Waxay ku saleysan tahay gelitaanka lambar, waa lagama maarmaan haddii aad rabto inaad xirto taleefan haddii ay dhacdo in la xado, iyo waxyaabo kale. Waxaa fiican inaad ku qorto meel aamin ah.
Gali taxanaha * # 06 #
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Dejinta qarsoon ee aad ku isticmaali karto taleefankaaga Huawei
Sida loo tirtiro koontada Zoom
Sida loo wadaago sawiradaada Instagram adoo adeegsanaya xiriiriye